Qalabka Arduino Oplà IoT ee horumarinta Internetka Waxyaabaha | Qalabka bilaashka ah
Arduino Oplà IoT Kit: xirmada cusub ee horumarinta ee Internetka Waxyaabaha
Arduino leeyahay tiro badan oo ah qaybo iswaafajiya, iyo sidoo kale xirmooyinka horumarinta oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku bilowdo ama mashaariic aad u horumarsan oo DIY ah. Laakiin hadda laga bilaabo, kuwa sameeya ayaa sidoo kale leh xirmo cusub oo loogu talagalay horumarinta mashaariicda IoT. Sidan ayaad ku heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad uga bilowdo adduunka Internetka Waxyaabaha.
Kala xisaabtan tarjumaad wanaagsan oo canaasiir ah taasi waa ku soo jiidan doontaa, taasina waa wax ku ool ah dhammaan barnaamijyada isku xiran iyo guriga caqliga badan ...
1 Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xirmada Arduino Oplà
1.1 Qalabka xirmooyinka
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xirmada Arduino Oplà
Mashruucan cusub ee loogu talagalay Internetka Waxyaabaha, ama IoT, waa waxa ku cusub Arduino. Qalab rasmi ah oo lagu sii daayay magaca Qalabka Arduino Oplà IoT iyo qaybo gogol ah oo kuu oggolaan doona inaad ku abuurto illaa 8 codsiyo kala duwan oo ku saabsan arimahan, oo leh casharro faahfaahsan oo aad ku bilaabi karto abuurista iyo inaad ka website-ka rasmiga ah ka yimid Arduino.
Mashaariicda maxaad abuuri kartaa Kaliya qalabkan ayay ka aadayaan aaladda hagidda fudud ee nalalka guryaha, iyo maamulka caqliga leh ee dhammaan nidaamka waraabka ee beerta, iyaga oo u sii maraya kuwa kale sida sameynta alaabada iyo xakamaynta nidaamyada kale ee caqliga leh, amniga, iwm.
El qiimaha waa $ 99 horayna waa loo heli karaa laga bilaabo Bogga rasmiga ah ee Arduino, xilligan meel kale lagama heli karo. Lacagtaas beddelkeeda, waxaad heli doontaa, marka lagu daro xirmada lafteeda, sidoo kale rukumo 12-bilood ah oo loogu talagalay Arduino Create Maker Plan. Taasi waxay siinaysaa marin u helka Arduino IoT Cloud, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay kaydiso sawirro daruuraha dhexdiisa ah, kordhinta tirada astaamaha, iyo inay taageero ka helaan looxyada saddexaad iyo aaladaha LoRa, iyo sidoo kale dhisma aan xad lahayn.
12 bilood ka dib, isticmaaleyaasha wali xiiseynaya inay sii wadaan adeegyada, waa inay cusbooneysiiyaan rukumo $ 5.99 bishiiba (Hadaadan furin barkinta, si otomaatig ah ayey kugu soo dalacayaan).
Sida for qaybaha Arduino Oplà IoT Kit, waxaad leedahay walxaha soo socda:
Saldhigga ugu weyn ee leh shaashadda midabka LCD, noocyo kala duwan oo dareemayaal ah, kontorool awood leh, RGB LEDs, iyo qaybaha kale iyo isku xirayaasha.
Waxa kale oo ku jira guddiga WiFi si loogu daro isku xirnaanta wireless-ka mashaariicdaada.
Dareemayaal badan, guryaha caagga ah, iyo fiilooyinka PnP (Plug & Play). Dhammaan si mashaariicda si fudud loogu soo ururin karo iyada oo aan loo baahnayn inay wax alxammaan.
para macluumaad dheeraad ah, waxaad arki kartaa fiidiyowgaan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Arduino Oplà IoT Kit: xirmada cusub ee horumarinta ee Internetka Waxyaabaha
PIR sensor: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato